Craft Beer, Ibhedi & neBreakfast kwindlela yaseFrancigena - I-Airbnb
Craft Beer, Ibhedi & neBreakfast kwindlela yaseFrancigena
Igumbi lakho lokulala e iflethi sinombuki zindwendwe onguMichaela
UMichaela ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-B&B kumgangatho wokuqala we-pub Le Spine, ilungele abo bafuna ukuchitha ubusuku bengcamla iibhiya zobuchwephesha zase-Italiya baze bahlale de kube lusuku olulandelayo!
Kanye ecaleni kwe-SS62 kunye ne-Via Francigena, indawo yokumisa isicwangciso sabo bahamba ngaselwandle. Amagumbi ahlaziywe kusetyenziswa izinto zendalo, izinto zokubuyisela kunye nokuyila. Amagumbi amabini akhoyo, sazise elikhethiweyo kwaye siya kuzama ukukuhlalisa.
Umoya ufudumele kodwa wale mihla. Ngabom ngaphandle kweTV!
Indlu ihlaziywe ngokupheleleyo kutshanje, amagumbi athokomele ngomoya olula kunye nentaba. Kumgangatho ophantsi kukho i-pub encinci, ekhethekileyo kwiibhiya zobugcisa kunye neemveliso ezisemgangathweni zasekhaya. Imekobume izolile kwaye inobuhlobo.
Umbono we-panoramic uyathandeka kwaye uyaguquka ngexesha leeyure zemini kunye namaxesha onyaka.
Intlambo izolile kwaye i-panoramic, indawo yokuya kuzo zombini izithuthuthu kunye nokhenketho olucothayo. Imizuzu eyi-10 ukusuka eBerceto, iyure enye ukusuka eParma, iTuscan-Emilian Apennine National Park kunye nolwandle.
Sisezintabeni, sijikelezwe ngamanye amasimi alinywayo kunye neenkuni ezininzi, nangona kulula ukuba sekupheleni kwendlela yelizwe, sixakeke kakhulu ngempelaveki kodwa kuthule kakhulu ebusuku. Ngemizuzu elishumi uhamba ngeenyawo ufikelela kumlambo waseBaganza.
Sihlala kumgangatho wesibini wendlu, ngoko ke sihlala sikhona kwaye sifumaneka emini nangokuhlwa de ivalwe indawo yokusela.
Ngoko ke sicela iindwendwe ukuba zibuye ngorhatya ngaphambi kokuba kuvalwe, nangayiphi na imeko ezinzulwini zobusuku.